Monday February 24, 2020 - 10:30:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Viruska dilaaga ah ee Carona ayaa kusii fidaya wadamada caalamka gaar ahaan kuwa dhaca qaaradda Aasiya.
Wararka ka imaanaya mandiqadda Khaliijka carabta ayaa sheegaya in markii ugu horraysay cudurka Carona uu dad kusoo riday wadamada Kuweyt iyo Baxreyn waxaana jirta cabsi laga qabo in uu meelo kale gaaro.
Wasaaradda caafimaadka Kuweyt waxay sheegtay in sedax qof laga helay cudurka halka xukuumadda Baxreyn ay xaqiijisay in hal qof uu cudurka Carona asiibay.
Dhinaca kale dowladda Shiinaha waxay xaqiijisay in shalay oo kaliya ay cudurka Carona udhinteen 150 qof Shiinays ah halka uu soo ritay 648 qof kuwaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaallada lagu Karaantiilo bukaanada cudurkan qaba.
isku geyn dadka uu Carona Virus ku dilay wadanka Shiinaha waxay gaarayaan 2595 qof, sidoo kale dadka uu cudurkan ku dilay wadanka Talyaaniga ayaa gaaraya sedax qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka.
Xaalad feejignaan guud ah ayaa looga dhawaaqay dhammaan magaalooyinka Talyaaniga, xukuumadda Roma waxay sheegaysaa in 150 qof uu cudurka Carona soo ritay waxaana laga cabsi qabaa in uu cudurka kusii faafo dhul hor leh.